It is me. Ko Niknayman.: တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် စွန့် စွန့် စားစားဆောင်ရွက်တဲ့ လူငယ်အပေါင်းအား ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်။
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် စွန့် စွန့် စားစားဆောင်ရွက်တဲ့ လူငယ်အပေါင်းအား ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်။
ဒီနေ့ မနက် (၈) နာရီနဲ့ (၁၀) နာရီကြားမှာ တာမွေ (၃) ကျောင်းနားမှာ မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါး၊ (၃၈) ဖြာမင်္ဂလာ၊ “လူ” ဆိုတာ စာရွက်လေးများ ဝေငှပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ရှေ့ ) မှာ ဇရက်ငှက်အကောင် (၁၁) ကောင်လွှတ်ကြပါတယ်။ ဒီ့အပြင် ဗိုလ်တစ်ထောင်ဆိပ်ကမ်းမှာလည်း ငါးကြီး (၁၁) ကောင်လွှတ်ကြပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး (ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး) ကနေ မြန်မာပြည် အာဏာရှင်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် စွန့် စွန့် စားစားဆောင်ရွက်တဲ့ လူငယ်အပေါင်းအား ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်။
Posted by Ko Niknayman at 4:30 PM